एकसाथ धेरैजना बेहोस हुनेगरी ‘मास हिस्टेरिया’ किन र कसरी हुन्छ ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर स्वास्थ्य एकसाथ धेरैजना बेहोस हुनेगरी ‘मास हिस्टेरिया’ किन र कसरी हुन्छ ?
३ चैत्र २०७७, मंगलवार १०:४८
त फागुन २० गते डोटीको केआई सिंह गाउँपालिकास्थित झिमेमालिका माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत १२ जना छात्रा एकाएक बेहोस भए । कक्षा ६, ७ र ८ मा अध्ययनरत ती छात्रा एकसाथ बेहोस हुँदा पढाइ नै प्रभावित भयो । विद्यालय प्रवेश गरेपछि काँप्ने, बेहोस हुने गरेका ती छात्रा विद्यालयबाट घर फर्केपछि आफै सामान्य अवस्थामा आए ।
उनका अनुसार हिस्टेरियाका कारण मानिस हुलमुल भएको ठाउँमा बेहोस् भएर ढल्छ भने छारे रोग लागेको व्यक्ति जनसुकै ठाउँमा वा एक्लै हुँदा पनि बेहोस हुन सक्छ । हिस्टेरिया भएको मानिस सम्हालिएर ढल्छन् भने छारे रोग हुनेहरू एक्कासी ढल्छन् । यस्तै हिस्टेरिया भएकाले जिब्रो टोक्दैनन् भने छारे हुनेहरूले जिब्रो टोक्छन् । दुवैको रोगको आपसमा कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको आचार्यले बताए । Source: ratopati.com
अचानक ‘ब्लड प्रेसर’ बढ्दा के गर्ने?